Android-L သို့ အမြည်းနည်းနည်း - MYSTERY ZILLION
Android-L သို့ အမြည်းနည်းနည်း
July 2014 edited July 2014 in Android Development
ဒါက ကျွန်တော် Android L နဲ့ပတ်သတ်ြပီးဖတ်မိတာလေးတ​ွေကို ရေးထားတဲ့ Notes လေးပါ ..
L Preview ကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ စတင်လေ့လာနေတဲ့ Android Developer တစ်ယောက်အတွက် Heads Up လေးတွေဆိုပါတော့ ..
MZ မှာမေးလို့ရတယ် ဖြေလို့ရပါတယ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ရေးချင်တာ Article ဖြစ်နေလည်း မေးခွန်းမဟုတ်ပေမယ့် ရေးလို့ရပါတယ်။ အကယ်၍မေးခွန်းတခုဟာ ကိုယ်တခြားမှာ ရေးထားတဲ့ Article တခုနဲ့ ဆက်စပ်လို့ ဖြေမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ရေးထားတာကို အဖြေအနေနဲ့ ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှမမ​ေးပဲနဲ့တော့ ကြော်ငြာသလို ဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက် ခွင့်မပြုပါဘူး နောက်တခါဆိုရင် ဖျက်ပါမယ်။ လာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အော် အဲလိုလား .. ကောင်းပါပြီ ကျွန်တော်မှတ်ထားပါ့မယ် ..
ကြ​ော်ြငာရအောင် ကျွန်တော်က ကိုယ်ပိုင် Domain နဲ့တ​ောင်တင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး ..
MZ မှာ Android နဲ့ပတ်သတ်ြပီး ဘာမှ သေချာမတွေ့လို့ Active နည်းနည်း ဖြစ်လာအောင် ဒီအတိုင်း Knowledge Share ချင်တဲ့ သဘောပါ ..
နောက်လဲ Android နဲ့ပတ်သတ်တာလေးတွေ ရေးချင်တဲ့စိတ်ရှိပါတယ် ..
Article အပြည့်အစုံ ရေးပြီးအောက်မှာ Link နဲ့ရော ညွှန်းလို့ရပါသလား ..
Yes, we will happy to allow. For your own contents, you may write your articles in MZ with or without original URL, it is your own choice. But when you have already written your contents in other places, we prefer with your original URL. That can help us when somebody is falsely claim your contents as an owner. Thank you for your contributions in MZ.